CSOs Engagement Proposed Framework under COVID-19 Revised and updated version Metta on 26 April 2020pdf
Coronavirus Disease pandemic is spreading extremely fast around the world, affecting all countries and peoples. The alarming situation has brought the attention of all governments and the WHO has alerted repeatedly on the importance to take preventive radical measures now,…
မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ တာဝန်မှအနားယူတော့မည့် ဦးစိုင်းစမ်ခမ်းထံမှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူသွားမည့် ဦးဂွမ်ရှာအောင်ထံသို့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကို မေတ္တာရုံးချုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ (၁၂) ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအခမ်း အနားသို့ ဘုတ်ဥက္ကဌ ဦးထွန်းအောင်ချိန်နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရုံးအသီးသီးမှ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါသည်။
မေတ္တာဖွဲ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်၏ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ (Senior Management Team) ၏ ၆၃ ကြိမ် မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁ဝ – ၁၁) ရက်နေ့မှာ ပဲခူးသင်တန်း ရိပ်သာ တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲ ရေး အဖွဲ့ဝင်များနှင့် နယ်ရုံး အသီးသီးမှ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များလေ့လာသူအဖြစ်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ Senior Management Team Meeting The 63rd Senior Management Team (SMT) meeting of…
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ တာဝန်မှအနားယူတော့မည့် ဦးစိုင်းစမ်းခမ်းအား နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူသွားမည့် ဦးဂွမ်ရှာအောင်အား ကြိုဆိုခြင်းနှင့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း အခမ်းအနားကို Golden Crab House Restaurant တွင် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ ည ၇ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအခမ်းအနားသို့ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စား လှယ်များ၊ နယ်ရုံးအသီးသီးမှ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။
We are proud to announce the appointment of Mr Gum Sha Awng as the new Executive Director of Metta Development Foundation (Metta), effective from 16 September 2019. He took over the position from Sai Sam Kham, whose second term has…